Tag: zvemukati zvinogadzira bhenji
Ongororo: Zvemukati Zvako Chigadzirwa Zvinofananidzwa?
Chipiri, June 16, 2015 Chipiri, June 16, 2015 Douglas Karr
Rundown iri kuvhura inoenderera mberi yekutsvagisa musika nzira pane zvemukati zvigadzirwa nzira. Nepo paine yakawanda yekutsvagurudza inowanikwa pachena maererano nezve zvemukati kushambadzira seyakazara, pane zvishoma zvishoma ruzivo rwakanangana nevemukati nyanzvi kushandisa kuti vatange maitiro avo chaiwo ekugadzira, maitiro, zviwanikwa zvevashandi, mabasa, uye mabasa, uye tekinoroji. Rundown ichave ichiburitsa yakakosha yekuvandudza kune ino yakakosha data gore rese. Rundown yakagadzira pfupi pfupi ongororo yezvinyorwa zvemukati mu